Playson माल्टा मा मुख्यालय संग एक प्रमुख गेमिंग कम्पनी हो। धेरै क्षेत्रहरु मा र 250 कर्मचारीहरु लाई दुनिया भर मा अनुभव को साथ प्लेसन एक धेरै सफल सफ्टवेयर विकास कम्पनी हो जसले पूर्ण जुआ समाधान प्रदान गर्दछ र 40 + ओमनी च्यानल HTML5 शीर्षक को पेशकश गर्दछ।
Betsoft द्वारा डबल जोकर पोकर एक साँच्चै स्पष्ट खेल हो जुन शीर्षक द्वारा वर्णन गर्न सकिन्छ। तपाईंले देख्नुहुने छैन ...
सर्कस डिलक्स- एक शब्द जो धेरै शब्दहरू भन्दा धेरै मजाको बारेमा भन्न सकिन्छ। ती सम्झनाहरू पुन: प्रतिष्ठित गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ...
Playson's Aquarium कैसीनो नि: शुल्क स्लॉटमा5रिल्सहरू,3पङ्क्तिहरू, र 30 भुक्तानी रेखाहरू छन्। विकासकर्ताहरूले धेरै रोचक विशेषताहरू थपे ...
के तपाईं हाम्रो ग्रहको अन्तिम अतुल्य कुनामा अन्वेषण गर्न तयार हुनुहुन्छ - महासागर? Aquatica मूल अनलाइन हो ...
बच्चाहरूको साहित्यको क्लासिक कथा एन्डिसस्लटहरूमा एलिसमा स्लट्स उपचार हुन्छ। प्लेसेसनद्वारा संचालित, यो एउटा5हो ...
केहि रंगीन पंखे मित्रहरु संग यस नवीनता स्लट मिसिन मा Playson सफ्टवेयर द्वारा शामिल हों। त्यहाँ5रिल्सहरू छन्, 10 paylines र ...
गर्मीमा हामी मा छ, जसको अर्थ छ कि ताजा रसदार फलको समय केवल एक कदम टाढा हो। ...
जटिल सुविधाहरू र अन्तरगणना कथाहरूको सबै नाटक बिना केही सरल स्लट भाग्नको लागि रुचाउनुहुन्छ? यदि तपाईं हो भने, ...
भारत एक अद्भुत देश संस्कृति, महान भोजन, र रेखा खेलहरूमा स्लॉट संग फिसलिरहेको छ। पूर्वी वादा एक ब्रान्ड हो ...
ड्रेकुला फिर्ता आउँछ, त्यसैले सांस पकड र प्लेन्सनको नयाँ भिडियो स्लॉट खेल - ड्रेकुला परिवारको अनुभव गर्नुहोस्। यो एक हो ...
यस5रील 30 payline भिडियो स्लॉट मा भूमध्य समुद्र को माध्यम ले आफ्नो यात्रा मा Odysseus Accompany। यो खेल छ ...
नोटरी डेमहरूको रहस्य
त्यहाँ नोरेटर डेम कैथेड्रलका स्पियरहरूमा अलिकति केही कुरा छ र यो समात्ने इनाम ...
अद्भुत जादू वन अनलाइन स्लॉटले9भुक्तानी रेखाहरू,5रिले र3पङ्क्तिहरूको साथ आउँछ। परीमा आउनुहोस् ...
हास्यास्पद लकी समुद्री डाकू मुफ्त अनलाइन स्लॉट मिसिनसँग9भुक्तानी रेखाहरू,5रिलेहरू, र3पङ्क्तिहरू छन्। यो क्यासिनोमा ...
जब तपाईंले स्काईवे खेल्नुहुन्छ तब बादल भन्दा माथि उच्च उच्च र यो मध्ययुगीन वैमानिक साहसिकमा तपाईंको भाग्य कमाउनुहोस्। Skyway कैसीनो ...
Playson को क्लियोपेट्रा गेमिङ स्लॉटमा5रिल्सहरू,3पङ्क्तिहरू, र 20 भुक्तानी रेखाहरू छन्। यो अचम्मको स्लॉट अचम्म छ ...
समुद्री डाकूको खजाना डिलक्स
रहस्यमय बगैंचा प्रविष्ट गर्नुहोस् जहाँ सबै कुरा हुन सक्छ! व्यावहारिक प्लेले जंगली सेभेन स्लॉट मिसिन नि: शुल्क गेमले तपाईंलाई प्रदान गर्दछ ...
लाउजिर्थडे फ्रि नि: शुल्क अनलाइन स्लॉट मिसिनले तपाइँले5रिल्स,3पङ्क्तिहरू, र 10 भुक्तानीको साथ आउँछ।
के तपाईं कहिल्यै जंगली हंटर हुन चाहानुहुन्छ? एक पूर्वनिर्धारित राज्यमा फर्काउन, जसको मात्र मात्र होईन ...
कब्रहरु को खजाने (freespin)
त्यसोभए उनीहरुसँगको सम्बन्धमा उनीहरु पनि धेरै छन्। पाँच-रील भिडियो स्लॉट, जुन द्वारा संचालित छ ...
कब्रहरु को खजाने (बोनस)
टमबस बोनस खेलको खजाना एक 5-रेल हो, सुविधामा सात-पेलेलाइन भिडियो स्लॉटमा बोनस र गोल, स्वत: प्ले र नि: शुल्क स्पिनहरू समावेश छन् ...
प्लेस्सन सफ्टवेयर द्वारा यो स्लट मिसिनमा Taiga जंगल खोज्नुहोस् जुन तपाईं गहिरो हृदयमा लिनुहुनेछ ...
आत्मा को एजटेक
त्यहाँ एक ठूलो रहस्य एजटेक र एजटेक सभ्यताको आसपास छ, सम्भवतः किनकि विषयको बारेमा धेरै लेखिएको छैन ...
यो काममा सबै कामको चरण, घर मा, वा जहाँ तपाईं जहाँ हुन सक्नुहुनेछ। यो समय हो ...
चोरी एक कला हो, जसले वर्षको लागि सिक्नुपर्छ। तर तपाईंसँग सिक्नको लागि एक महान अवसर छ ...
के तपाईं सबै समयको सबैभन्दा प्रसिद्ध बुर्सेलका थिएटरको कथा थाहा छ? तयार हुनुहोस्, सीट लिनुहोस् ...
स्पेस, फाइनल फ्रान्सियर। ब्रह्मांडको विशालता मानिसहरूको लागि आश्चर्यको कहिल्यै नसोचेको स्रोत हो, र खेल ...
प्लेन्सन, जहाँ सम्म हामी जान्दछौं, उत्तम स्लट विकासकर्ता मध्ये एक हो जब यो सादगी संग विवाह गर्ने हो ...
तपाईं विज्ञान कथा फिल्म 'ट्रोन' संग परिचित हुन सक्छ जुन 1982 मा भाग्यो र त्यसपछि 2010 मा ...
प्लेसेसनबाट वर्तनीक स्लॉट मिसिनमा हेलोवीन विषयको मज्जा लिनुहोस्। यो प्रयास र परीक्षण गरिएको विषय सबै डरलाग्दो हुनेछ ...
सांताको थैलामा उपहारहरू र सुन्दर आश्चर्यहरू छन्! विशेष रूपमा स्लट खेलहरूको प्रशंसकहरूका साथ ...
Playson अपडेट गरिएको: जनवरी 26, 2019 लेखक: Damon
1 डबल जोकर पोकर
2 सर्कस डिलक्स
4 एजटेक साम्राज्य
7 एलेन्समा चमत्कारहरू
8 भाग्यशाली पक्षी
10 जंगल बधाई छ
12 फलको फल
13 पूर्वी प्रसन्न
14 ड्र्याकुलाको परिवार
16 नोटरी डेमहरूको रहस्य
17 क्रिसमस मीरी
18 जाडो वन
19 भाग्यशाली रीलहरू
20 भाग्यशाली समुद्री डाकू
22 ट्रयाकसँग रूले
23 क्लियोपेट्रा को धन
24 समुद्री डाकूको खजाना डिलक्स
25 जंगली सेवन
27 जंगली शिकारी
28 कब्रहरु को खजाने (freespin)
29 कब्रहरु को खजाने (बोनस)
30 थन्डर रिल्स
32 आत्मा को एजटेक
33 पब तल
34 कला को कला
35 बुलेसलेस रानी
37 सुनको खोजी
38 बम्पर फसल
39 स्पेस रोशनी
41 क्रिसमस पूर्व